Olee otú Hichapụ music si iPod kpochapụwo | Hichapụ Songs si iPod kpochapụwo
Olee otú Hichapụ music si iPod kpochapụwo
Ehihie ọma ~ m mesịrị nwetara ihe iPod na mmekọrịta ya na iTunes ọma! Nsogbu bụ, achọghị m nile nke songs m iTunes na-na iPod. Enwere m ike ihichapụ ụfọdụ songs si m iPod ma ọ bụ ka m ga-weghachi ma malite n'elu? Nkwanye ùgwù Osụk, Kellye Mac. (Site Apple nkwado obodo)
Ò synced music ka iPod kpochapụwo na iTunes? Ma ugbu a, ị na-ahụ na e nwere na-na na ọtụtụ na-achọghị songs na gị iPod kpochapụwo. Syncing music ka iPod kpochapụwo dị mfe. Otú ọ dị, ọ bụghị otú ahụ mfe ka ihichapụ music si iPod kpochapụwo gwụla ma na ị nwere iPod kpochapụwo music iwepụ ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe banyere ya, m atụ aro ka ị na-eji ihe dị mfe na-eji iPod kpochapụwo music iwepụ ngwá ọrụ. Ọ bụ Wondershare TunesGo. Ọ na-enye gị ike massively ihichapụ songs on iPod kpochapụwo.
Olee ka ihichapụ songs si iPod kpochapụwo
Ibudata ngwá ọrụ a na kọmputa gị. Mgbe ahụ, ike iṅomi mfe nzọụkwụ n'okpuru iji nweta ghọtara otú ka ihichapụ music si iPod kpochapụwo.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod kpochapụwo na kọmputa
Wụnye na-agba ọsọ ngwá ọrụ a na kọmputa gị na-agba ọsọ Windows 8, Windows 7, Windows Vista ma ọ bụ Windows XP. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPod kpochapụwo na kọmputa site na eriri USB. iPod kpochapụwo 4, iPod kpochapụwo 3, iPod kpochapụwo 2 na iPod kpochapụwo-n'ụzọ zuru ezu na-akwado.
Nzọụkwụ 2. Nhichapụ songs anya iPod kpochapụwo
Na n'aka ekpe sidebar, pịa "Media". N'elu akara, pịa "Music". Mgbe ahụ, ị ​​na-music window. Dị ka ị na-ahụ, ndị niile songs na-gosiri na music window. Họrọ songs na ị chọrọ ka ihichapụ na pịa "Hichapụ". Jide n'aka na gị iPod kpochapụwo jikọọ n'oge nhichapụ.
E wezụga ihichapụ songs si iPod kpochapụwo, ị nwekwara ike ihichapụ nkịtị listi ọkpụkpọ anya gị iPod kpochapụwo. Pịa "Playlist" na n'aka ekpe sidebar. Mgbe ị na-ahọrọ listi ọkpụkpọ na ị na-ekpebi ka ihichapụ, pịa "Hichapụ".
Cheta na: a na ngwá ọrụ na-adịghị ka ị ihichapụ smart listi ọkpụkpọ na gị iPod kpochapụwo. Ke adianade do, ị nwere ike nyefee music si iPod kpochapụwo ka iTunes na kọmputa maka ndabere.
Ọ bụ ya. Mfe na ngwa ngwa, ọ bụghị ya?
E wezụga na, ngwá ọrụ a na-ahapụ gị mbubata ị mmasị songs na listi ọkpụkpọ gị iPod kpochapụwo. Na music window, pịa abịazi nọdụ triangle na "Tinye". Mgbe esiri-ala menu Pop elu, ị nwere ike pịa "Tinye nchekwa" ma ọ bụ "Tinye File" iji tinye music gị iPod kpochapụwo.
Video nkuzi maka Olee otú iji Hichapụ Music si iPod Omuma
Olee otú Play MKV Files na iPod
> Resource> iPod> Olee otú iji Hichapụ Songs si iPod kpochapụwo